Vaovao - Fandinihana optika ny fitondran-tenan'ny famehezana eo ambanin'ny fihenjanana mekanika, hafanana ary simika
Fanadihadiana optika amin'ny fitondran-tena fitomboka amin'ny tsindry mekanika, hafanana ary simika
Fitaovana raikitra amin'ny fanalana nify malpositioned dia ampiasaina amin'ny orthodontics ho an'ny tanora sy ny olon-dehibe. Na dia ankehitriny aza, ny fahadiovana am-bava sarotra sy ny fiakaran'ny vidin'ny takelaka sy ny residu amin'ny sakafo mandritra ny fitsaboana miaraka amin'ny fitaovana multibracket (MBA) dia maneho risika karies fanampiny1. Ny fivoaran'ny demineralization, izay miteraka fiovan'ny fotsy sy mangirana amin'ny enamel dia fantatra amin'ny hoe lesion fotsy (WSL), mandritra ny fitsaboana ny MBA dia voka-dratsy matetika sy tsy ilaina ary mety hitranga aorian'ny 4 herinandro monja.
Tao anatin'izay taona vitsy lasa izay dia nitombo ny fiheverana ny famehezana ny haben'ny buccal sy ny fampiasana tombo-kase manokana sy ny verinia fluoride. Ireo vokatra ireo dia antenaina hanome fisorohana caries maharitra sy fiarovana fanampiny amin'ny fihenjanana ivelany. Ireo mpanamboatra isan-karazany dia mampanantena fiarovana amin'ny 6 sy 12 volana aorian'ny fampiharana tokana. Ao amin'ny literatiora ankehitriny dia misy valiny sy tolo-kevitra samihafa momba ny vokatra fisorohana sy ny tombony azo amin'ny fampiharana ireo vokatra ireo. Ho fanampin'izay, misy ny fanambarana isan-karazany momba ny fanoherana ny adin-tsaina. Misy vokatra dimy ampiasaina matetika ao: ny tombo-kase mifangaro miorina Pro Seal, Light Bond (samy vokatra Reliance Orthodontic Products, Itasca, Illinois, Etazonia) ary Clinpro XT Varnish (3 M Espe AG Dental Products, Seefeld, Alemana). Notadiavina ihany koa ireo varnisy fluoride roa Fluor Protector (Ivoclar Vivadent GmbH, Ellwangen, Alemana) ary Protecto CaF2 Nano One-Step-Seal (BonaDent GmbH, Frankfurt / Main, Alemana). Ny fitambaran-jiro, ny fanasitranana maivana, ny radiopaque nanohybrid dia nampiasaina ho vondrona mifehy tsara (Tetric EvoFlow, Ivoclar Vivadent, Ellwangen, Alemana).
Ireo tombo-kase dimy ampiasaina matetika ireo dia nohadihadiana tamina vitro manoloana ny fanoherana rehefa avy niaina tsindry mekanika, enta-mavesatra ara-pahasalamana sy fitrandrahana simika nahatonga demineralization ary vokatr'izany WSL.
Hotsapaina ireto hipotaka manaraka ireto:
Fomban-kevitra 1.Null: Ny fihenjanana mekanika, mafana ary simika dia tsy misy fiantraikany amin'ireo tombo-kase dinihina.
Fomban-kevitra 2.Alternative: ny fihenjanana mekanika, hafanana ary simika dia misy fiantraikany amin'ny tombo-kase dinihina.
Fitaovana sy fomba
Nify anoloana bovine 192 no nampiasaina tamin'ity fanadihadiana in vitro ity. Ny nify bovine dia nalaina avy tamin'ny biby famonoana (trano famonoana omby, Alzey, Alemana). Ny mason-tsivana fisafidianana ny nify bovine dia ny karies- ary tsy misy kilema, enamel vestibular tsy misy fandokoana ny tampon'ny nify sy ny haben'ny satroboninahitry ny nify.4. Ny fitehirizana dia tao anaty vahaolana 0,5% chloramine B5, 6. Talohan'ny sy taorian'ny fampiharana ny fononteny dia nodiovina niaraka tamin'ny paty tsy misy solika sy florida (Zircate Prophy Paste, Dentsply DeTrey GmbH, Konstanz, Alemana) ny faritra malama tsara amin'ny nify bovine rehetra, nodiovina tamin'ny rano ary maina tamin'ny rivotra5. Ny fonosana vy vita amin'ny vy tsy misy nikela dia nampiasaina tamin'ny fandinihana (Mini-Sprint Brackets, Forestadent, Pforzheim, Germany). Ny fononteny rehetra dia nampiasa Gel UnitekEtching, Transbond XT Light Cure Adhesive Primer ary Transbond XT Light Cure Orthodontic Adhesive (3 M Unitek GmbH, Seefeld, Alemana). Taorian'ny fampiharana ny fononteny, nodiovina indray ireo faritra malama vita amin'ny vestibular miaraka amin'ny Paste Prophy Zircate mba hanala ireo reside miraikitra.5. Mba hanahaka ny toe-pahasalamam-pahasalamana mety mandritra ny fanadiovana mekanika, ny tapa-lava archwire tokana 2 cm (Forestalloy manga, Forestadent, Pforzheim, Alemana) dia napetaka tamin'ny bracket miaraka amina ligature tariby efa niorina (0.25 mm, Forestadent, Pforzheim, Alemana).
Tombontsoa miisa dimy no nohadihadiana tamin'ity fanadihadiana ity. Tamin'ny fisafidianana ireo fitaovana, dia niresaka momba ny fanadihadiana natao ankehitriny. Tany Alemana, mpitsabo nify 985 no nanontaniana momba ny tombo-kase nampiasaina tamin'ny fomba fanaony orthodontic. Ny fitaovana dimy voalaza indrindra ao amin'ireo fitaovana iraika ambin'ny folo dia voafantina. Ny fitaovana rehetra dia nampiasaina tamin'ny fomba hentitra araka ny torolalan'ny mpanamboatra. Tetric EvoFlow dia nanjary vondrona mifehy tsara.
Miorina amin'ny modely fotoana novolavolain'ny tena mba hakana tahaka ny enta-mavesatry ny mekanika, ny tombo-kase rehetra dia niharan'ny enta-mavesatra mekanika ary notsapaina avy eo. Borosy nify elektrika, Oral-B Professional Care 1000 (Procter & Gamble GmbH, Schwalbach am Taunus, Alemana), no nampiasaina tamin'ity fandinihana ity mba hanahafana ny enta-mavesatra mekanika. Ny fizahana tsindry hita maso dia manazava rehefa tafahoatra ny tsindry fifandraisana ara-batana (2 N). Oral-B Precision Clean EB 20 (Procter & Gamble GmbH, Schwalbach am Taunus, Alemana) dia nampiasaina ho lohan-nify. Ny loha borosy dia nohavaozina ho an'ny vondrona fitsapana tsirairay (ie6 heny). Nandritra ny fandalinana dia namboarina hatrany ny «toothpaste» (Elmex, GABA GmbH, Lörrach, Alemana) mba hampihenana ny fiantraikany eo amin'ny valiny7. Tamin'ny andrana voalohany dia norefesina sy nisaina ny habetsaky ny savony namboarina tamin'ny alàlan'ny fifandanjana mikraoba (Balance analytical pioneer, OHAUS, Nänikon, Switzerland) (385 mg). Ny loha borosy dia nohosorana tamin'ny rano namboarina, nohosorana tamina pasta nosy 385 mg ary napetraka teo amin'ny tampon'ny nosy vestibular. Ny enta-mavesatra mekanika dia nampiharina tamin'ny tsindry tsy tapaka sy ny fifandimbiasan'ny lohan'ny borosy. Ny fotoana fampirantiana dia nojerena hatramin'ny faharoa. Ny borosy nify elektrika dia notarihin'ilay mpanadihady ihany tamin'ny andiam-panadinana rehetra. Ny fifehezana tsindry maso dia nampiasaina mba hahazoana antoka fa tsy nihoatra ny tsindry fifandraisana ara-batana (2 N). Taorian'ny fampiasana 30 min dia namboarina indray ny borosy nify mba hiantohana ny fampisehoana tsy tapaka sy feno. Rehefa vita ny fikosehana dia nodiovina nandritra ny 20 s ny nify niaraka tamin'ny rano famaohana malefaka ary avy eo maina tamin'ny rivotra8.
Ny maodelim-potoana ampiasaina dia miorina amin'ny fiheverana fa ny salan'isan'ny fotoana fanadiovana dia 2 min9, 10. Izany dia mifanitsy amin'ny fotoana fanadiovana 30 s isaky ny quadrant. Ho an'ny mpitsabo nify antonony, nify feno 28 nify, izany hoe nify 7 isaky ny quadrant. Isaky ny nify dia misy faritra nify 3 mifandraika amin'ny borosy nify: buccal, occlusal ary am-bava. Ny faritry ny nify manodidina sy tsy lavitra dia tokony diovina amin'ny fosin-nify na mitovy amin'izany fa matetika tsy azo idirana amin'ny borosy nify ary noho izany dia azo tsinontsinoavina eto. Miaraka amin'ny fotoana fanadiovana isaky ny quadrant 30 s, ny fotoana fanadiovana 4,29 s isaky ny nify dia azo raisina. Izany dia mifanitsy amin'ny fotoana 1.43 s isaky ny nify. Raha fintinina dia azo atao ny mihevitra fa ny eo ho eo ny fotoana fanadiovana ambonin'ny nify isaky ny fomba fanadiovana dia eo ho eo. 1,5 s. Raha misy mihevitra ny tampon-nify vestibular voatsabo amin'ny famehezana ambonin-tany, ny enta-mavesatra fanadiovana isan'andro 3 s eo ho eo dia azo raisina ho fanadiovana nify indroa isan'andro. Izany dia mifanaraka amin'ny 21 s isan-kerinandro, 84 s isam-bolana, 504 s isaky ny enim-bolana ary afaka tohizana araka izay tiana. Amin'ity fandinihana ity dia namboarina sy nohadihadiana ny fanandramana fanadiovana aorian'ny andro 1, herinandro, 6 herinandro, 3 volana ary 6 volana.
Mba hanamboarana ny fahasamihafana eo amin'ny mari-pana mitranga amin'ny lava-bava sy ireo fihenjanana mifandraika amin'izany, ny fahanterana artifisialy dia namboarina tamin'ny bisikileta mafana. Amin'ity fandinihana ity ny enta-mavesatra bisikileta mafana (Circulator DC10, Thermo Haake, Karlsruhe, Alemana) eo anelanelan'ny 5 ° C sy 55 ° C amin'ny tsingerina 5000 ary ny fotoana fanatobiana sy fametahana 30 s tsirairay avy dia notanterahina tamin'ny fanahafana ny fiakarana sy ny fahanteran'ny famehezana. mandritra ny antsasaky ny taona11. Ny rano fandroana mafana dia nofenoina rano madio. Rehefa nahatratra ny mari-pana tany am-boalohany, ny santionan'ny nify rehetra dia nanidina im-5000 teo anelanelan'ny dobo mangatsiaka sy ny dobo hafanana. Ny fotoan'ny fanitrihana dia 30 s avy, narahin'ny fotoana nitete sy fandefasana 30 s.
Mba hanamboarana ny fanafihana asidra isan'andro sy ny fizotran'ny mineraly amin'ireo tombo-kase ao amin'ny lava-bava, dia nisy ny fiovan'ny fiovan'ny toetr'andro. Ny vahaolana voafantina dia ny Buskes12, 13vahaolana nofaritana imbetsaka tao amin'ny literatiora. Ny sandan'ny PH an'ny vahaolana déméreralalisation dia 5 ary ny an'ny vahaolana remineralization dia 7. Ny singa ao amin'ny vahaolana remineralization dia ny calcium dichloride-2-hydrate (CaCl2-2H2O), ny potassium dihydrogen phosphate (KH2PO4), HE-PES (1 M ), hydroxide potasioma (1 M) ary aqua destillata. Ny singa ao amin'ny vahaolana déméréralisation dia ny calcium dichloride -2-hydrate (CaCl2-2H2O), ny potassium dihydrogen phosphate (KH2PO4), ny methylenediphosphoric acid (MHDP), ny potassium hydroxide (10 M) ary ny aqua destillata. Natao bisikileta pH 7 andro5, 14. Ny vondrona rehetra dia iharan'ny remineralalisation 22h sy demineralalisation 2h isan'andro (mifandimby 11h-1 h-11 h-1 h), miorina amin'ny protokolon'ny bisikileta pH efa nampiasaina tamin'ny literatiora15, 16. Vilia fitaratra roa lehibe (20 × 20 × 8 cm, 1500 ml3, Simax, Bohemia Cristal, Selb, Alemana) no nosafidiana kaontenera izay nitahirizana ny santionany rehetra. Nesorina ihany ireo fonony rehefa novana ho lovia hafa ireo santionany. Ny santionany dia notehirizina tamin'ny hafanan'ny efitrano (20 ° C ± 1 ° C) tamin'ny sanda pH tsy tapaka tao anaty lovia fitaratra5, 8, 17. Ny sanda pH ny vahaolana dia voamarina isan'andro miaraka amin'ny metatra pH (3510 pH Meter, Jenway, Bibby Scientific Ltd, Essex, UK). Isaky ny andro faharoa dia havaozina ny vahaolana feno, izay nanakana ny fihenan'ny sandan'ny pH. Rehefa manova santionany amin'ny lovia iray mankany amin'ny iray hafa dia nodiovina tsara tamin'ny rano namboarina ireo santionany ary avy eo maina tamin'ny jet-n'ny rivotra mba tsy hampifangaro ireo vahaolana. Taorian'ny bisikileta pH 7 andro, ny santionany dia notehirizina tao amin'ny hydrophor ary nanombatombana mivantana teo ambanin'ny mikraoskaopy. Ho an'ny fanadihadiana optika amin'ity fandinihana ity, ny microscope nomerika VHX-1000 miaraka amin'ny fakantsary VHX-1100, ny tripod S50 mihetsika miaraka amin'ny optika VHZ-100, ny lozisialy fandrefesana VHX-H3M ary ny monitor LCD 17-santimetatra avo lenta (Keyence GmbH, Neu- Isenburg, Alemana) no nampiasaina. Sehatra fanadinana roa miaraka amin'ny sahan'olon-tokana 16 avy no azo faritana ho an'ny nify tsirairay, indray mandeha ary ny apical an'ny base bracket. Vokatr'izany dia saha 32 ny isaky ny nify sy saha 320 isaky ny fitaovana no voafaritra ao anatin'ny andiam-pitsapana. Mba hiresahana tsara ny fifandraisan'ny klinika isan'andro sy ny fomba fanombanana amin'ny maso ny tombo-kase amin'ny maso tsy mitongilana, ny saha tsirairay dia jerena ambanin'ny mikroskopika nomerika miaraka amin'ny fanamafisana 1000 ×, tombanana amin'ny maso ary omena amina karazana fanadinana. Ny variam-panadinana dia 0: material = ny saha voadinika dia feno rakotra famehezana tanteraka, 1: tombo-kase tsy misy kilema = ny saha voadinika dia mampiseho fatiantoka feno tanteraka na fihenam-bidy amin'ny fotoana iray, izay nanjary hita ny faritra nify, nefa misy sosona sisa tavela amin'ny tombo-kase, 2: fatiantoka ara-pitaovana = ny saha voadinika dia mampiseho fatiantoka ara-pitaovana feno, miharihary ny faritry ny nify na *: tsy azo tombana = ny saha voadinika dia tsy azo aseho ara-optika ampy tsara na tsy ampiharina tsara ny tombo-kase, avy eo ity tsy nahomby ny saha ho an'ny andiany fitsapana.
Fotoana fandefasana: Mey-13-2021